Ahịa Ọdịnaya na Usoro Ahịa Ọdịnaya | Martech Zone
Njikwa ọdịnaya, ire ọdịnaya, na ngwaahịa ahụmịhe onye ọrụ, ngwọta, ngwa ọrụ, ọrụ, atụmatụ na omume kacha mma maka azụmaahịa sitere n'aka ndị dere akwụkwọ Martech Zone.
Enwere arụmụka ahụike n'ịntanetị n'etiti mkpa ụlọ ọrụ iji kwalite ebumnuche ha na data yana ikike nke ndị na-azụ ahịa ichekwa data nkeonwe ha. Echiche m dị umeala n'obi bụ na ụlọ ọrụ ejirila data eme ihe ruo ọtụtụ afọ nke na anyị na-ahụ nzaghachi ziri ezi n'ofe ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ụdị dị mma ejirila ọrụ dị ukwuu, ụdị ọjọọ emetọọla ọdọ mmiri ịre ahịa data ma hapụ anyị nnukwu ihe ịma aka: Kedu ka anyị ga-esi bulie na
Ihu anya bụ ihe dị mkpa mgbe a bịara n'ịkọwa usoro dị mgbagwoju anya. Ma ọ bụ oru ngo nwere chaatị Gantt iji nye nkọwa nke ọkwa ọ bụla nke ntinye teknụzụ, ngwa ahịa ahịa nke na-eme ka nkwukọrịta ahaziri onwe ya nye onye na-atụ anya ma ọ bụ onye ahịa, usoro ire ere iji hụ anya mmekọrịta ọkọlọtọ na usoro ire ahịa, ma ọ bụ ọbụna naanị eserese iji chee echiche njem nke ndị ahịa gị… ike ịhụ, kesaa, na imekọ ihe ọnụ na usoro a